အဲဒီနိုင်ငံတော်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဟင်? ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ လူဝီဘုရင်လိုခပ်ဆိုးဆိုးကောင်ကြီးလား? နိုင်ငံတော်ဟာ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် ဘယ်ရာထူးအဆင့်အထိ လူတွေ အကြုံးဝင်မလဲ?
သတင်းစာထဲက စာသားလေးတွေကို ဖတ်နေမိလို့ပါ။ နိုင်ငံတော်က မေတ္တာစေတနာ အပြည့်နဲ့ ပြည်သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ငွေအကုန်အကျခံပြီး ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ရန်ကုန် မန္တလေး မီးရထား နှစ်လမ်းသွား ဒွေးလမ်းကြီးဟာ တကယ်တော့ မေတ္တာလမ်းကြီးဖြစ်ကြောင်း .... ရီချင်သွားလို့။ အဲဒီနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့လူကြီးက သူ့အမေလင် ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ဒီမီးရထားလမ်းကြီးကို အကုန်အကျခံ ဖောက်ခဲ့တာပေါ့နော်။ တိုင်းပြည်၊ နေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူ ပြည်သားများ၊ အစိုးရ .... အဲဒီလိုရှိတဲ့ဆီမှာ တိုင်းပြည်က မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတ တွင်းထွက်တွေဟာ ပြည်သူတွေအားလုံးပိုင်တယ်။ အစိုးရဆိုတာ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်သူတို့ ထမ်းဆောင်သော အခွန်အခတွေ၊ ၀င်ငွေတွေနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက် တာဝန်ထမ်းဆောင် ပေးနေသူတွေ ဆိုတဲ့အချက်တွေ၊ servant leader ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးတွေ.... လီကွမ်းယုကြီး စင်ကာပူကို ဘယ်လို ထူထောင်လာတယ် ဆွဲတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ ... သေချာတယ် ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတော်လို့အမည်ခံထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ မသိတာလား မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား ...။
Top Gun ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ဇာတ်လိုက် (Tom Cruse) က သင်တန်းမှာ တိုက်လေယာဉ်ကို စတန့်ထွင်မောင်းတော့ သူ့ရဲ့ သင်တန်းမှူးက ဆူပါတယ်။ Tax payer's money နဲ့ ၀ယ်ထားတဲ့ ဒီလေယာဉ်ပျံကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်တဲ့ ပျက်ကျသွားနိုင်တဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ အဲဒီ tax payer's money ဆိုတဲ့ ခံယူချက်အတွေးလေးကို ပြောချင်တာပါ။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ role ကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ စကားလေးလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီက နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့လူကြီးများ ဒါမျိုးလေးတွေ တွေးနိုင်တဲ့ အသိဥာဏ်လည်း ရှိပုံမပေါ်ပါဘူး။
Nothing lasts forever.... ကျွန်တော် အင်မတန့် အင်မတန်ကို ကြိုက်တဲ့စကားလေးပါ။ ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲ ၉၉ယောက်နဲ့ အရင်းတစ်ယောက်ကို သတ်ပြီး မင်းဖြစ်လာ၊ အိန္ဒိယတခွင် စစ်မက်ပြုပြီး အာဏာစက်ချဲ့ ...နောက်ပိုင်းမှာ သာသနာတွေပြု၊ ရေတွင်း ရေကန် စေတီပုထိုးတွေ ရှစ်သောင်းလေးထောင်ကျော် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ အာသောကဘုရင်ကြီးတောင် သေခါနီးတော့ ( အမတ်တွေက ဘဏ္ဍာတိုက်တွေကို ပိတ်ပစ်ကြလို့) နောက်ဆုံးတော့ လက်ထဲက ကိုက်လက်စ ဇီးဖြူသီးတစ်ခြမ်းပဲ ကိုယ်ပိုင်ကျန်ပါတယ်တဲ့ ....စိတ်ဆင်းရဲ ကိုယ်ဆင်းရဲနဲ့ သေသွားပြီး မြွေကြီးသွားဖြစ်ပါသတဲ့။ သိပ်မကြာခင်ကမှ နာလိုက်ရတဲ့ သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့ တရာေးလးပါ။ ဧကရာဇ်မင်းကြီး၏ ဘ၀နိဂုံးတဲ့။
ဒို့ဆီက နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ အကောင်ကြီးရဲ့ နိဂုံးကိုလည်း ကြည့်လိုက်ချင်သေး .....
Posted by little moon at 10:19 AM
တစ်ချိန်က ရှမ်းတဲနဲ့ ကျွန်တော်ဦးဦးများ
the way you express
EMBA အာစရိယပူဇော်ပွဲနှင့် မိတ်ဆုံစားပွဲ
poverty line **
statement of UN Country Team